Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha-Snubber Warshada Shiinaha ee Snubber
ROHS iyo REACH u hoggaansan Axial snubber capacitor SMJ-TE
Kala duwanaanshaha CRE ee IGBT snubber capacitors waa ROHS iyo REACH u hoggaansan.
1. Astaamaha ololka
2. Xero caag ah ama cajalad Mylar ah
3. Epoxy dhamaadka buuxiyey
4. U hoggaansanto UL94
5. Custom loo qaabeeyey la heli karo
CRE waxay bixisaa dhammaan noocyada capacitors snubber
1. Xidhiidhiyayaasha nuugista qoyaanka cusub waxaa naqshadeeyay oo ay soo saartay CRE
2. CRE waa hogaamiyaha naqshadaynta capacitor filimada iyo wax soo saarka.
3. Haddii aad u baahan tahay qeexitaannada mugga nuugista qoyaanka ee gaarka ah, u gudub xaruntayada naqshadaynta si aad u hesho capacitor la habeeyey.
Waxa ugu horrayn loo isticmaalaa in lagu xaddido heerka kororka korantada ee wareegyada kuwaas oo ah
xad-dhaaf ah, si loo ilaaliyo beddelka iyo ilaalinta semiconductors ee awoodda
qalabka elektarooniga ah;shaandhaynta iyo kaydinta tamarta.
Meelaha ugu muhiimsan ee laga codsado waa rectifiers, SVCs, sahayda korantada baabuurta, iwm.
GTO snubber capacitor ee qalabka korontada ku shaqeeya
Wareegyada snubber-ka ayaa lama huraan u ah diode-yada loo isticmaalo wareejinta wareegyada.Waxay ka badbaadin kartaa diode ka koronto koronto, taas oo soo bixi karta inta lagu jiro habka soo kabashada.
Naqshadeynta ugu sarreysa ee hadda jirta capacitors filimada snubber ee codsiyada korantada IGBT
1. Caagag, Lagu Shaabadeeyey Xabagta;
2. Dheecaannada naxaasta ee daasadaha ah ee dahaadhka ah, rakibaadda fudud ee IGBT;
3. Iska caabbinta danab sare, tgδ hooseeya, heerkulka hooseeya;
4. ESL iyo ESR hooseeya;
5. Wadnaha garaaca sare ee hadda.
CRE snubber capacitors film waxaa loogu talagalay hawlgalka ugu sarreeya ee hadda jira ee looga baahan yahay ka hortagga danabyada ku-meel-gaarka ah.
1. dv/dt sare oo u adkeysan kara
2. Ku rakibida fudud ee IGBT
Naqshad heer sare ah oo IGBT Snubber capacitor ah oo loogu talagalay codsiyada awooda sare
5. Wadnaha sare ee hadda;
6. UL shahaado.
Capacitors Polypropylene Snubber Capacitors loo isticmaalo danab sare, codsiyada hadda jira iyo garaaca wadnaha sare
Snubber Capacitors waa kuwa hadda-sare, awood-soo noqnoqonaya oo sarreeya oo leh terminal axial ah.Axial Film Capacitors ayaa laga heli karaa CRE.Waxaan bixinaa alaabada, qiimaha, iyo xaashida xogta ee Axial Film Capacitors.
1. ISO9001 iyo UL shahaado;
2. Alaabooyin ballaadhan;
Kapacitor Snubber Danab Sare Jumlad
CRE waxay bixisaa dhammaan noocyada capacitors snubber.
1. Capacitors snubber cusub oo ay samaysay oo ay samaysay CRE
2. Hogaamiyaha ee naqshadaynta capacitor filimada iyo wax soo saarka.
3. Haddii aad u baahan tahay qeexitaanno snubber gaar ah, u gudub xaruntayada naqshadeynta si aad u hesho capacitor caado ah oo loo qaabeeyey.
Filimka birta ah ee IGBT Snubber capacitor
Kapacitor Filim- Hadda Sare ee Mashiinka alxanka (SMJ-TC)
Qaabka Capacitor: SMJ-TC
1. Electrodes nuts Copper
2. Cabbir yar oo jireed iyo rakibid fudud
3. Tignoolajiyada dabaysha cajaladda Mylar
4. Buuxinta resin engegan
5. Soo-celinta Taxanaha U Dhiganta Hoose (ESL) iyo Iska-caabbinta Taxanaha u dhiganta (ESR)
2. Korontada ugu sarreysa iyo nuugista hadda ugu sarreysa iyo ilaalinta u beddelashada qayb ka mid ah qalabka elegtarooniga ah
Capacitors-yadani waxay ku habboon yihiin inay u adkeystaan ​​garaacyada aadka u culus ee hadda jira sida caadiga ah ee lagu kulmo ilaalinta GTO.Xidhiidhada axial waxay u oggolaanayaan inay yareeyaan inductance taxane ah oo ay bixiyaan koronto koronto oo lagu kalsoonaan karo oo koronto oo xoog leh iyo kuleylka wanaagsan ee kuleylka la soo saaro inta lagu jiro adeegga.
Dielectric luminta hooseeya ee filimka polypropylene Snubber capacitor ee codsiga IGBT
1. Sifooyinka dib-u-kicinta ololka waxaa lagu hubiyaa isticmaalka balaastigga iyo buuxinta dhammaadka epoxy taasoo waafaqsan UL94-VO.
2. Qaababka terminal iyo cabbirrada kiisaska waa la beddeli karaa.